Barcelona oo usoo Same finalka ka Copa Del Rey.
Home Horyaalka Spain Barcelona oo usoo Same finalka ka Copa Del Rey.
Barcelona ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda Granada kulan qeyb ka ahaa koobka boqorka spian ee Cop del rey ciyaar ka dhacday garoonka kooxda Garanada estadio Nuevo Los Carmenes.
Garanada ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta iyadoo daqiiqadii 33aad uu goolka furitaanka dhaliyey xidigii kooxda chesea Kenedy goolkaas ayaana qeybta hore lagu kala maray.
Markii la isku soo laabtay qeybta labaad markale barcelona ayeey ku sii adkaatay xaalad kadib markii xidiga kooxda Garanada soona maray kooxda city uu goolka labaad ugu shubay barcelona daqiiqadii 47aad.
Barcelona oo yaaban waxaa Neefta kusoo celiyey Grezmann kadib kubad fiican uu ka helay messi daqiiqadii 88aad goolka barbarahana waxa kusii daray jordi Alba caawin uu ka helay Antonio Grezmann daqiiqadii 92aad.
Ciyaarta ayaa lagu daray waqti dheeri ah oo sodon daqiiqo ah si loo kala saaro labada kooxood daqiiqadii 100aad waxaa goolka sedexaad ee barcelona u dhaliyey xidiga wadanka france Grezmann oo xalay ismuujiyey.
Balse Garanada intaas kuma ekaan oo goolkeeda sedexaad waxaa u saxiixay fede Vico daqiiqadii 103aad marka ay meshaas mareyso waxaa barcelona u dhaliyeen labo gool oo ay israacsadeen De jong iyo alba ciyaarta ayaana sidaas kusoo dhamaatay iyadoo barcelona ay ugu gudubtay wareega xiga ee Quartel finalska.
Previous articleFalanqeynta Kulanka Derbiga: Tottenham Vs Chelsea ee Horyaalka Premier League
Next articleJose mourinho oo ka hadlay kulanka adag ay caawa la dheelayaan chelsea iyo arimo kale.